Booliiska Talyaaniga oo baraya cayaar yahanka kooxda Juventus Cristiano Ronaldo markii la sheegay inuu safar u baxay si uu uga qeyb galo dhalashada gacalisadiisa. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Booliiska Talyaaniga oo baraya cayaar yahanka kooxda Juventus Cristiano Ronaldo markii la...
Booliiska Talyaaniga oo baraya cayaar yahanka kooxda Juventus Cristiano Ronaldo markii la sheegay inuu safar u baxay si uu uga qeyb galo dhalashada gacalisadiisa.
Booliiska Talyaaniga ayaa baaritaan ku wada cayaar yahanka kooxda Juventus Cristiano Ronaldo kaddib markii la sheegay inuu safar u baxay si uu uga qeyb galo dhalashada gacalisadiisa.
Waxaa lagu eedeeyay inuu jebiyay shuruucda Covid-19 isagoo u kala safray gobollada Piedmont iyo Valle d’Aosta.
Muuqaal haatan la tirtiray oo la soo dhigay baraha bulshada ayaa muujinaya lammaanaha oo ku sugan hoteel buuraha ku yaalla, xilli Georgina Rodriguez ay u dabaal degeysay dhalashadeeda iyadoo 27 jir noqotay.
Talyaaniga ayaa waxaa maalin walba cudurka ugu dhintay boqollaal qof.
Dalkaas waxaa si xun u saameeyay xanuunka safmarka ah markii uu bilowga ahaa sanadkii hore, haatanna wuxuu ku jiraa jahwareer siyaasadeed, isagoo la daalaa dhacaya yareynta kiisaska mowjadda labaad ee xanuunka.
Boliiska Valle d’Aosta ayaa sheegay inay baarayaan in lammaanaha ay u safreen hoteelka Courmayeur.
Marka la eego shuruucda Talyaaniga, waxaa mamnuuc ah in la isaga kala goosho gobollada ay digniinta Covid ka jirto ee Qadka Oronjaha loo yaqaanno, marka laga reebo sababo shaqo amaba haddii ay yihiin hoygaaga labaad.
Wararka warbaahinta Talyaaniga ayaa sheegaya in lammaanaha ay Talaadadii u safreen ayna ku hoydeen hoteelka kahor inta aysan Arbacadii ku laaban Turin, oo ah saldhigga Naadiga Serie A ee Ronaldo.
Rodriguez, oo dharka xayeysiisa, ayaa sawirka la wadaagtay 23m oo ku xiran barteeda.
Haddii lagu helo inay jebiyeen shuruucda, waxay labadooduba wajihi doonaan ganaax.
Arrintan ayaa imaaneysa bilooyin kaddib markii Ronaldo qudhiisa uu ku dhacay Covid-19. Xilligaas wasiirka cayaaraha ee Talyaaniga ayaa ku eedeeyay inuu u safray Portugal wax yar kahor inta aan laga helin fayraska.
Vincenzo Spadafora ayaa Ronaldo ku tilmaamay “macangag” iyo “qof aan xushmad lahayn” wuxuuna ku eedeeyay inuu baal maray shuruucda Covid-19. Cayaar yahanka ayaase beeniyay inuu wax khalad ah sameeyay.
Previous articleHoggaanka Falastiin oo soo dhoweeyey go’aanka maamulka Biden ku furay xafiisyada ururka xoreynta Falastiin ee PLO uu ku lahaa Washington
Next articleImaaraatka Carabta Burundi iyo Rwanda oo lagu daray “liiska cas” ee dalalka laga mamnuucay in dadkoodu ay safarro ku tagaan UK.
War kasoo baxay dowladda Ingiriiska ayaa waxaa looga dalbaday Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay, kadib kulan ayyeesheen, inay soo saaraan qaraar ku baaqaya in...
Beesha Caalamka oo Dagniin culus Hawada u marisay Maxamed Mursal
Dowladaha Sacuudiga iyo Qatar oo xaqiijiyay in Arbacada...
Kenya oo soo dhawetsay Go aan Igaad ee muranka kala dhaxeeyey...
Ciidamada Milatariga Somaliya oo Qarax lagula eegtay degmada Waajid ee gobolka...
Wasiirka Maaliyadda ee Qatar oo xabsiga loo taxabay sababo la xiriira...
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo ku eedeeyay Madaxda Somali...